Xukunka qofki Islamka sheganaya magac ahan burrinaya macne ahan – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Waxaa jira kooxo badan oo beenshay Islaamka macne ahaan inkasta oo ay Islaamka sheeganayaan ayaga oo ku dhawaaqaya labada ashahaatin, ashadu an-laa-ilaha illa laahu, wa ash-haddu anna muxamaddun rasuulu laahi, oo tukanaya oo soomaya, maxaa yeelay waxay burriyeen labada ashahaatin ayaga oo rumaysatay wax ka soo horjeeda kolkaa way ka baxeen towxiidka ayaga oo Eebbe cid aan ahayn caabuday awgeed kolka waa kufaar muslimiinna ma aha sida kuwa ictiqaadsan in Cali bin Abii Daalib Ilaah yahay ama uu Khadirkii yahay ama uu yahay kii amarka Ilaahay wax ku xukumayay iyo qaar kale. Ama wixii kuwaa ku xukun ah ee hadal ah ama fal ah.
Xukunka qofkii inkiraya labada ashahaatin waa in la kufriyo shaki la’aan hoygiisuna waa jahannama asiga oo ku waaraya dhexdeeda uusanna ka joogsanayn cadaabku maalinta qiyaamaha oo aanuu dhamaad lahayn kana uusan soo baxayn naarta.
Qofkiise guta xuquuda Ilaahay tan ugu wayn oo ah in la kali yeelo kor ahaayee oo ah in uu ka tago wax kale ula shirko yeeliddiisa, ee rumeeya rasuulkiisa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee laguma waarsho naarta jahannama waaritaan waligiis ah si kasta oo uu u galo dambiyadiisa awgood, meesha u dambaysana sikastaba ha ahaatee waxay ahaanaysaa naarta oo uu ka soo baxo iyo jannada oo uu galo kadib markii uu qaatay ciqaabtiisii uu mutaysnaa haddii aanan Eebbe u dhaafin.
Wuxuu yiri Rasuulku nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee: “waxaa naarta ka soo baxaya qofkii yiraahda laa-ilaaha illa-laahu oo qalbigiisa haaw in la ego o iimaan ah ku jiray” waxaa weriyay al-Bukhaari.
Qofkiise saxay towxiidka Eebbe kor ahaayee ee ka fogaaday dambiyada ee falay waxyaabigii Eebbe faray wuxuu geli doonaa jannada oo ah meesha nicmada nag ee joogtada ah. Waxaana caddaynaya xaddiiska qudsiga ah ee uu weriyay abuu Hurayra Allah ha ka raalli noqdee: wuxuu yiri rasuulkii Eebbe nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee: “Eebbe wuxuu yiri: Mudnaayee oo waynaayee: waxaan u sameeyay addoomahayga suubban wax aanan ilu arag dheguna maqal aanna ku soo dhicin qof qalbigiis”. Waxaa kale ee uu yiri abuu Hurayrah Eebbe ha ka raalli noqdee: Akhriya haddii aad doontaan qowlkii Eebbe kor ahaayee: (Ma oga nafi waxa loo qariyay ee ah wax indo ku qabowsadaan abaalmarin awgeed wixii ay falijireen) [as-Sajdah:17] waxaa ku soo weriyay al-Bukhaari saxiixiisa
axkaam, Maqaalo, radin shubuhaat
Xukunka qofkii Islaamka sheeganaya magac ahaan isla markaana burrinaya macne ahaan